ချစ်လှစွာသောဖောက်သည်များ! ဖောက်သည်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သတင်းပါ.
ဖောက်သည်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သတင်းပါ. မတ်လ ၁၂ရက် ၂၀၁၇ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နွေရာသီကို စတင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပဲ မတ်လ ၁၃ရက်နေ့ ၂၀၁၇ကနေစပြီး အောက်ပါ အရောင်းအ၀ယ်အတွဲတွေအတွက် အချိန်အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်: WTI, BRN, XAGUSD, XAUUSD, Palladium, Platinum -ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန်နှင့် ပိတ်ချိန်ကို ယခင်အချိန်နှင့်မတူဘဲ တစ်နာရီစောပြီး အပြောင်းအလဲလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. Forex ဈေးကွက်အတွက်ကတော့ -၂၀၁၇ မတ်လ ၁၇ရက်နှင့် ၂၄ရက် ( ၂၃:၀၀ MT အချိန်)တွင် အချိန်တစ်နာရီစောပြီး ဈေးကွက်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပနိုင်ငံများတွင်တော့ မတ်လ ၂၆ရက် ၂၀၁၇ရက်နေ့မှာ နွေရာသီကို စတင်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုနေ့ပြီးနောက်မှာတော့ အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက်ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန်များကို ပုံမှန်ယခင်အချိန်များအတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. မတ်လ ၂၆ရက် ၂၀၁၇ရက်နေ့တွင်တော့ MT4အက်ပလီကေးရှင်း၏ဈေးကွက် အချိန်ကတော့ ယခင်နေ့ရက်များထက် တစ်နာရီလျော့နည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
မတ်လ ၂၆ရက် ၂၀၁၇ရက်နေ့တွင်တော့ MT4အက်ပလီကေးရှင်း၏ဈေးကွက် အချိန်ကတော့ ယခင်နေ့ရက်များထက် တစ်နာရီလျော့နည်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်.